कट्रिनालाई फाप्यो यो वर्ष, करिनालाई झट्का | Online Entertainment News	Stay Connected
कट्रिनालाई फाप्यो यो वर्ष, करिनालाई झट्का
सन् २०१२ को समाप्तीसँगै बलिउडमा यसको समिक्षा पनि सुरु हुन थालेको छ । यो बर्ष बलिउडका चर्चित नायकहरुले अभिनय गरेको सिनेमाले १०० करोडको व्यापार सरल तरिकाले गरेका छन् । नायक सलमान खान, साहरुख खान, अक्षय कुमार, रणविर कपुर, अजय देवगन जस्ता कलाकारको सिनेमाले १०० करोडको व्यापार गरेका छन् । नायकहरुको बर्चस्व रहेको बलिउडमा यो बर्ष नायिकाहरु पनि एक सय करोडको क्लबमा सामेल भएका छन् । आखिर नायिकाहरुमा यो बर्ष सर्वाधिक चर्चित र नम्बर १ मा को रहन पुग्यो, यसको चर्चा हामी यहा गर्दैछौ । आखिर टप टेनको सुचिमा कुन नायिका कती औ स्थानमा पर्न सफल भए, आउनुहोस् जानौं ।
१.कट्रिना कैफः गतबर्ष सम्म नायिका करिना कपुरका कारण एक स्थान तल रहेकी नायिका कट्रिना कैफले यो बर्ष भने खुबै मिहिनेत गरिन् । यसैले पनि उनलाई यो बर्ष बक्स अफिसमा राम्रो साथ मिलेको छ । सन् २०१२ को सुरुवातमै चलचित्र ‘अग्निपथ’को चिक्नी चमेली बोलको गीतमा आइटम गरेर चर्चा कमाएकी कैफले यो बर्ष २ व्लकबस्टर सिनेमा दिइन् । सलमान खानसँग उनले अभिनय गरेको ‘एक था टाइगर’ले १९९ करोडको व्यापार गर्‍यो । यो सिनेमा बर्षकै सर्वाधिक व्यापार गर्ने सिनेमाको रुपमा दहरीयो । यस्तै कटि्रनाको दिवाली धमाका ‘जब तक हे जानले’ पनि बक्स अफिसमा कमाल मच्चायो । करिब १२५ करोडको व्यापार गरेको यो सिनेमाले कटि्रनालाई नम्बर १ को स्थानमा मात्र पुर्‍याएन, साहरुखसँगको उत्कृष्ट जोडिको रुपमा पनि चिनायो ।२. प्रियंका चोपडाः हरेक किसिमका अभिनय गर्न सक्ने नायिका प्रियंका चोपडाका लागि यो बर्ष सुखद रह्यो । उनले अभिनय गरेका ‘अग्निपथ’ र ‘बर्फी’ले सय करोड भन्दा माथीको व्यापार गरे । ‘बर्फी’मा उनले गरेको अभिनयको चर्चा पनि धेरै नै भयो । साहरुख खानसँगको प्रेमसम्वन्धले पनि उनलाई यो बर्ष सर्वाधिक चर्चामा ल्यायो ।३. अनुष्का शर्माः अनुष्कालाई चलचित्र जब तक हे जानले सर्वाधिक चर्चामा ल्याइदियो यो बर्ष । उनले चलचित्रमा निर्वाहा गरेको चुलबुले भुमिकालाई धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरे । सिनेमा चल्नुको श्रेय कटि्रना भन्दा पनि अनुष्कालाई बढी गयो । भारतमा १२५ र ओभरसिजमा हालसम्म ७५ करोड माथीको बिजनेश गरेको जब तक हे जानले अनुष्कालाई यो बर्ष तेश्रो स्थानमा खडा गराएको छ ।४. सोनाक्षी सिन्हाः नायिका सोनाक्षी सिन्हाका लागि यो बर्ष सुखद बन्यो । उनले अभिनय गरेका तीन सिनेमाले बक्स अफिसमा १०० करोड भन्दा माथीको व्यापार गरेका छन् । यो बर्षको सुरुवातमा प्रदर्शनमा आएको ‘राउडी राडोर’, दिवालीमा प्रदर्शनमा आएको ‘सन अफ सरदार’ र यो बर्षको अन्त्यमा प्रदर्शनमा आएको ‘दबंग २’ ले सोनाक्षीलाई भाग्यमानी नायिकाको रुपमा चिनाएको छ ।५. करिना कपुरः नायिका करिना कपुरका लागि यो बर्ष सफल रहन सकेन । उनले सर्वाधिक आशा गरेको हिरोइनले बक्स अफिसमा हाबा खाएपछि करिनाको करिअर पनि धरमरायो । यस्तै उनले सैफअलि खानसँग अभिनय गरेको चलचित्र ‘एजेन्ड बिनोद’ले समेत बक्स अफिसमा कुनै कमाल मच्चाउन नसकेपछि करिनाको करिअर ओरालो लागेको अड्कल काट्न थालिएको छ । उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘तलाश’ले पनि बक्स अफिसमा कुनै कमाल मच्चाउन सकेन । आमिर खानसँग करिना देखिएपनि चलचित्रले १ सय करोडको क्लबमा आफुलाई उभ्याउन सकेन । यो बर्ष करिना सैफअलि खानसँगको बिहेका कारणले बढि चर्चामा रहिन् ।६. विद्या बालन : नायिका बिद्या बालनका लागि यो बर्ष सामान्य रहयो । व्यापारी सिद्धार्थ राय कपुरको तेश्रो श्रीमती भएर बिहे गरेपछि उनको चर्चाले बलिउड तात्यो । गतबर्ष ‘द डर्टि पिक्चर्स’बाट चर्चा कमाएकी विद्याका लागि यो बर्ष कहानी मात्र एक सफल सिनेमा दहरियो ।७. आसिनः बलिउडमा नायिका आसिन अभिनयले भन्दा पनि भाग्यले चम्किएकी नायिकाको रुपमा परिचित छन् । उनले अभिनय गरेका प्राय सिनेमाले बक्स अफिसमा १ सय करोडको व्यापार गरेका छन् । उनले यो बर्ष अभिनय गरेको चलचित्र ‘बोल बच्चन’ १ सय करोडको क्लबमा उभियो । यस्तै ‘खेलाडी ७८६’ पनि व्यापारीक रुपमा सफल भएपछि आसिनको चर्चा यो बर्ष बलिउडमा चर्चित र सफल नायिकाको रुपमा चल्यो ।८. दीपीका पादुकोणः यो बर्ष नायिका दीपीका पादुकोणको ‘ककटेल’ नामक एक मात्र सिनेमा हिट भयो । तर यसले पनि आफुलाई सय करोडको क्लबमा भने खडा गर्न सकेन । तर पनि दीपीकाको चर्चा भने बलिउडमा सर्बाधिक रुपमा रहन पुग्यो । दीपीका सन् २०१३ मा छाउने निश्चित भएकाले पनि सन् २०१२ मा उनको चर्चा धेरै भएको हो । उनले अभिनय गरेको ‘रेश २’ २०१३ को सुरुवातमै प्रदर्शनमा आउँदैछ । यस्तै नायक साहरुख खानसगको ‘चेन्नाई एक्सप्रेस’, उनका पूर्व प्रेमी रणबिर कपुरसँगको ‘ए जवानी दिवानी’, ‘रामलिला’जस्ता सिनेमा सन् २०१३ मा प्रदर्शनमा आउँदैछ ।९. आलिया भट्टः नव नायिका आलिया भट्टको बलिउड प्रवेश धमकेदार रहन पुग्यो । करण जोहरको ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ले उनलाई एकैपटक चर्चामा ल्यायो । यो सिनेमाको धमकेदार कलेक्शनले आलिया आउँदो बर्ष बलिउडमा छाउने निश्चित छ । आलियालाई यो बर्ष बलिउडमा एक सम्भावना बोकेकी नायिकाको रुपमा हेरिएको छ ।१०. इलियाना डायनाः चलचित्र ‘बफिर्’ र ककटेलको सफलताले इलियाना डायनलाई यो बर्ष सफल बनायो । १ सय करोडको क्लबमा सामेल बफिर्मा उनले निर्वाहा गरेको भुमिकाको चर्चा निक्कै नै भयो । उनी पनि आउदो बर्षमा बलिउडमा धमाका मच्चाउने नायिकाको सुचिमा दहरिएकी छिन् ।